Itemplate yokwenza ifayile ye-dxf kuluhlu lwamanqaku kwi-Excel-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Template ukwenza ifayile DXF ukusuka kuluhlu Excel lamanqaku
Ngoku kutshanje uJuan Manuel Anguita uye wandidlulisela entsha inguqu yale sicelo ukuba ngaphambili si khuthaze, kodwa elo xesha lishiye ngeengxaki ezithile neenguqulelo ezintsha ze-Excel.
Ukusetyenziswa kwayo kulula kakhulu, kodwa kusebenza kakhulu. Kuya kufuneka ufake inani lenqaku, ulungelelanise x, y, z; Ndibeke ukusebenzisa ulungelelwaniso lwe-UTM, kodwa isenokuba lulungelelwaniso lwasekhaya (hayi indawo).
Ke ikhowudi inokongezwa enokuba yinkcukacha esetyenzisiweyo kwisikhululo esipheleleyo kwaye iya kubonakala njengelebheli. Kwaye okokongeza igama lomaleko apho liya kugcinwa khona.
Phakathi kokuphuculwa okukule nguqulelo kukuba ukudaliswa kwefayili ye-dxf kukhawuleza, ngaphambi kokuba unamathele umatshini ukuba kukho amanqaku amaninzi.
Kwakhona, inani lamalungiselelo linokufikelela kwi-10,000 kwaye kunokwenzeka ukuba ukhethe ukuba ifayile iyadalwa kwi-2D okanye i-3D.
Kwaye okona kulungileyo: iyahambelana Windows 7 kunye ne-Excel 2007.
Awusenayo imbonakalo yangaphambili. Kwaye ngoku xa iqhosha le-dxf licinezelwe liphakamisa umyalezo obonisa ukuba ligcinwa phi.
Ngenxa yoko, banokubona ukuba kulwakhiwo lwezixhobo (infra) udale iikhowudi, ubukhulu, amanqaku kunye nokubhaliweyo ngokwahlukeneyo. Kuyafana nangomaleko wokuphakamisa (lev).
Ndiyitshintshile umbala kwiindawo ezibonakalayo, kodwa ngokuzenzakalelayo ziya kumhlophe.
Kwakhona kunokwenzeka ukuba amanqaku ayengabonwa, kodwa oko kufuneka uguqule ifomathi usebenzisa umyalelo weDDPTYPE.
Enye impazamo enokwenzeka kukuba ukucwangciswa kwee-commas kunye namaphuzu kwi-decimals kunye nabahluli bamawaka akuphosakeleyo.
Oko kulungisiwe kwiFayile / ukhetho / phambili. Apho unokuchaza "sebenzisa izahluli zenkqubo" okanye uzitshintshe ngokubona kwakho.
Ukusuka apha unokukhuphela ifayile kuhlobo lwe-v17.1. Ifuna ixabiso lokomfuziselo nge Ikhadi lesikweletu okanye i-Paypal.
Ekubeni iFayile ye-Excel ene-macro ehlanganisiweyo, ine-extension ye-xlsm, nangona kunjalo, i-Excel ivula ngokuqhelekileyo.
Ikhonkco ikhona ekupheleni kweposi
UCarlos Antonio da Silva uthi:
Unjani u-faço ukuthenga le planilha?
Sawubona uBenjamin, ndikuthumelele i-imeyile ngekhonkco lokukhuphela.
Hlola i-imeyile yakho, kukho ikhonkco.
benjamin fernandez uthi:
Sawubona! Ndihlawule nge-paypal, kodwa xa ndibuyela kumrhwebi ndibona iphepha lewebhu elifanayo? Ndingayilanda njani itemplate?
I-ID yomthengiso: xxxxxxxxxx800223W
UBenjamin Fernandez uthi:
Emva kokuba ndihlawule ndibuyele kwiphepha elifanayo kwaye ndiphinde ndibone ukuhlawula (?). Ndingayilanda njani?
Mhlobo onobuhle, uyitshintsha njani indlela apho ifayili ye-dxf igcinwa khona? mbulela
Ndiyabonga, kwakuncedo kakhulu (Y)
Tomas Garcia uthi:
Isixhobo esihle kakhulu Siyabonga!
Ngaba umhlobo oxolisayo! Ngaba kuya kwenzeka ukuba utshintshe indlela apho ifayile igcinwa khona, njengoko igcinwe kwindlela ehleliweyo, indlela ofuna ukuyigcina ifayile ingatshintshwa ngayo? Siyabonga kwaye silinde impendulo yakho
Ndiyabulela umhlobo, ndiya kuzama
Igalelo elihle kakhulu, unombulelo oluninzi kunye nokuvuyisana ngayo yonke impumelelo ngoku, impumelelo!
Ndiyabulela wam intanda.
Uhlala ukhunjuzwa, kukho iifayile zogcino kwiiGographics ozenzayo zisasetyenziswa apho.
i roberto uthi:
Umhlobo obalaseleyo G!, Ngokuhlala eshiya iminikelo ebalulekileyo kulabo abadinga ukutshaya i-geo-spatial, kuhlala kukuvuyela ukumbulisa kwaye uyaqonda ukuba uyaqhubeka kulo msebenzi, unyaka omkhulu.